တရုတျသမ်မတရှီကငျြ့ဖငျြ ဘာတှယေူလာပွီး ဘာတှပွေနျယူသှားမလဲ – Voice of Myanmar
အမရေိကနျနဲ့ ကုနျသှယျရေးစဈပှဲဆငျနှဲနတေဲ့ သမ်မတကွီး ၊ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ အခရာကတြဲ့ သမ်မတ မွနျမာ့အိမျနီးခငျြး အားကွီးနိုငျငံဖွဈတဲ့ တရုတျနိုငျငံရဲ့ သမ်မတကွီး ရှီကငျြ့ဖငျြဟာ မွနျမာနိုငျငံတျောသမ်မတဦးဝငျးမွငျ့ရဲ့ ဖိတျကွားခကျြအရ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီ ၁၇ ရကျနကေ့နေ ဇနျနဝါရီ ၁၈ ရကျနအေ့ထိ မွနျမာနိုငျငံကို နိုငျငံတျောခရီးစဉျအဖွဈ လာရောကျတော့မှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ အပွောငျးအလဲလုပျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရှေးကောကျပှဲမတိုငျခငျ ၂၀၀၉ ခုနှဈက ဒုသမ်မတ အဖွဈနဲ့ မွနျမာနိုငျငံကို လာခဲ့ပွီး ခုလညျး ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ မတိုငျခငျ သူတကြော့ပွနျ လာပွနျပါပွီ။
တရုတျသမ်မတကွီးရဲ့ ခရီးစဉျဟာ ဘယျလောကျအရေးပါမလဲ၊ မွနျမာ့နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေး အခငျးအကငျြးတှအေပျေါ ဘယျလောကျအကြိုးသကျရောကျမလဲဆိုတာ နိုငျငံရေးအသိုငျးအဝိုငျးက စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာနကွေပါတယျ။
ဒီတော့ တရုတျသမ်မတ ရှိကငျြ့ဖငျြဟာ တရုတျနိုငျငံရဲ့ သမ်မတ ဘယျလိုဖွဈလာလဲ သူဘယျလို ပုဂ်ဂိုလျလဲ ဆိုတာ နညျးနညျးလလေ့ာကွညျ့ရအောငျပါ။
ရှီကငျြ့ဖငျြကို ၁၉၅၃ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ ၁၅ ရကျနမှေ့ာ တရုတျနိုငျငံ ဆနျရှီးပွညျနယျ ဖူဖငျြမှာ အဖ ရှီကြုံးရှငျ၊ အမိ ခြီရှငျးတို့က မှေးဖှားခဲ့ပွီး ဟနျတရုတျလူမြိုးဖွဈပါတယျ။ မှေးခငျြးမောငျနှမ လေးယောကျအနကျ တတိယမွောကျ သားဖွဈပါတယျ။ အသကျ ၁၄ နှဈအရှယျမှာ ကှနျမွူနဈဝါဒီဖွဈလာတယျ။ ၁၉၇၄ ခုနှဈမှာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ ကှနျမွူနဈပါတီသို့ ဝငျရောကျခဲ့ပါတယျ။ မာကျဈသီအိုရီနဲ့ အတှေးအချေါယူဝါဒဆိုငျရာ ပညာရပျ အထူးပွုဘာသာနဲ့ ခငျြးဟှာတက်ကသိုလျ၊ လူ့အဖှဲ့အစညျးနဲ့ လူမှုသိပ်ပံကြောငျးမှ ဥပဒဒေေါကျတာဘှဲ့ ရရှိခဲ့ကာ ၁၉၆၉ ခုနှဈမှ ၁၉၇၅ ခုနှဈအထိ ဆနျရှီးပွညျနယျ ရနျခြှမျးဒသေရှိ ဝမျအမျးရိစုပေါငျး လယျယာ၊ လနျြ့ကြားဟဲအဖှဲ့မှာ ပါတီခှဲ အတှငျးရေးမှူးအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ပါတယျ။
ရှီကငျြးပငျဟာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံရဲ့ သမ်မတ ဟူကငျြတောငျနရောကို ၂၀၁၃ ခုနှဈမတျလ ၁၄ ရကျမှာ ဆကျခံခဲ့ပွီး တရုတျနိုငျငံရဲ့ ၇ ဦးမွောကျသမ်မတဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ သမ်မတတာဝနျမထမျးဆောငျမီ ၂၀၀၈ ခုနှဈကနေ ၂၀၁၃ ခုနှဈအထိ ဒုတိယသမ်မတအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ အာဏာရ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီရဲ့ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျရာထူး ထမျးဆောငျနသေလို ဗဟိုစဈရေးကျောမရှငျရဲ့ ဥက်ကဌလညျးဖွဈပါတယျ။
သမ်မတရှီကငျြးပငျလကျထကျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအရှိနျမွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့ BRI စီမံကိနျးကို လကျရှိမှာ အကောငျအထညျဖျောနပွေီး ဒါဟာ တရုတျနိုငျငံအတှကျ သမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာ ရညျမှနျးခကျြအကွီးဆုံး နိုငျငံတကာမူဝါဒရေးရာ အစီအစဉျတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီစီမံကိနျးဟာ ကမ်ဘာ့နိုငျငံပေါငျး ၆၀ ကိုခြိတျဆကျပေးနိုငျဖို့ရညျရှယျထားပွီး အခွခေံအဆောကျအဦတှေ တဈဆကျတဈစပျတညျးဖွဈမှု၊ လှတျလပျသောကုနျသှယျမှုနဲ့ ပွညျသူအခငျြးခငျြးကုနျသှယျမှုကို မွငျ့တငျပေးဖို့ ရညျရှယျထားပွီး မွနျမာနိုငျငံဟာလညျး ဒီစီမံကိနျးရဲ့ တဈစိတျတဈဒသေပါဝငျနပေါတယျ။
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံဟာ ၁၉၈၇ ခုနှဈမှာ တံခါးပိတျစီးပှားရေးစနဈကနေ ဈေးကှကျစီးပှားရေးကို ပွောငျးလဲကငျြ့သုံးခဲ့တာကွောငျ့ စီးပှားရအေလငျြအမွနျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာခဲ့တာဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ပို့ကုနျတငျပို့သူနဲ့ ဒုတိယအကွီးဆုံး သှငျးကုနျတငျသှငျးတဲ့နိုငျငံဖွဈပါတယျ။ ဂြီဒီပီအရလညျး ကမ်ဘာ့ဒုတိယ စီးပှားရေးအငျအားကွီးနိုငျငံဖွဈ လာခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီမှာ အမွဲတမျးအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတဈနိုငျငံဖွဈသလို ကမ်ဘာ့ကုနျသှယျရေး အဖှဲ့ WTO ၊ APEC ၊ G-20 အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံလညျးဖွဈပါတယျ။ စဈရေးအနနေဲ့ နြူကလီးယားလကျနကျတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ကမ်ဘာ့အငျအားကွီး စဈတပျနဲ့ စဈရေးအသုံးရိတျကတော့ကမ်ဘာပျေါမှာ ဒုတိယအမြားဆုံး အသုံးပွုတဲ့ နိုငျငံဖွဈပါတယျ။
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံဟာ အရှအေ့ာရှရဲ့ အကွီးဆုံးနိုငျငံဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့မှာ တတိယ သို့မဟုတျ စတုတ်ထအကွီးဆုံးနိုငျငံလညျးဖွဈပါတယျ။ လူဦးရအေနနေဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလအထိ ၁၄၃၅ သနျးရှိပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာ လူဦးရအေမြားဆုံးနိုငျငံဖွဈပါတယျ။
ဧရိယာစတုရနျးမိုငျပေါငျး ၉ ဒသမ ၆ သနျးရှိပွီး မွမေကျြနှာသှငျပွငျမြိုးစုံရှိတဲ့ တရုတျနိုငျငံမှာ ပွညျနယျပေါငျး ၂၂ ခု၊ ပိုငျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ၅ ခု၊ မွူနီစီပါယျအုပျခြုပျရေးမွို့တျော ၄ ခုနဲ့ အထူးအုပျခြုပျရေးဒသေ ၂ ခုရှိပွီး အာဏာရတရုတျကှနျမွူနဈပါတီက အုပျခြုပျပါတယျ။
၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ ရှီကငျြ့ဖငျြဟာ ဒုသမ်မတအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံကို လာရောကျဖူးပမေယျ့ ခုမွနျမာပွညျခရီးစဉျဟာ သမ်မတရှီရဲ့ ဒီနှဈသဈအတှကျ ပထမဆုံးပွညျပခရီးစဉျလညျးဖွဈသလို သမ်မတအနနေဲ့တော့ ဒီခရီးစဉျဟာ ပထမဆုံးအကွိမျလာရောကျခွငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံကို တရုတျသမ်မတဟောငျး ကနျြဇီမငျးက ၂၀၀၁ ခုနှဈမှာ လာရောကျခဲ့ပွီးနောကျ ၁၉ နှဈတာကာလအတှငျး မွနျမာနိုငျငံကို ရောကျရှိလာမယျ့ တရုတျသမ်မတရှီရဲ့ ပထမဆုံးခရီးစဉျနဲ့ပတျသကျလို့ မွနျမာနိုငျငံကို ဘာတှအေကြိုးသကျရောကျမှုဖွဈမလဲဆိုတာ လလေ့ာသုံးသပျသူတှကေ အကဲခတျနကွေပါတယျ။
တရုတျ-မွနျမာသံတမနျဆကျဆံရေးကို ၁၉၅၀ ခုနှဈမှာ စတငျခဲ့တာဟာ အခုဆိုရငျ နှဈ(၇၀)ပွညျ့မွောကျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တရုတျ-မွနျမာ ကုနျသှယျမှုဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၁၀၀၀ ကြျော ပမာဏအထိ ရှိနပေါတယျ။ ဒါတငျမကသေးဘဲ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ တခွားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကိစ်စရပျတှမှော တရုတျနိုငျငံက ပါဝငျပတျသကျမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကုနျပိုငျးက နိုငျငံတကာတရားရုံးမှာ ရငျဆိုငျထားရတဲ့ နိုငျငံ ဖွဈပါတယျ။ အိုငျစီဂတြေရားရုံးကို မသှားခငျလေးမှာလညျး တရုတျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဝမျယိဟာ မွနျမာနိုငျငံကိုရောကျလာခဲ့ပွီး နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိမှာ အိုငျစီဂကြေ အပွီးသတျအမိနျ့ခမြှတျခွငျးမရှိသေးပမေယျ့ အမိနျ့ခပြွီးရငျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ အနောကျနိုငျငံတှကေ ပိတျဆို့မှုတှေ ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ လလေ့ာသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
သမ်မတရှီရဲ့ခရီးစဉျဟာ နိုငျငံတကာတရားရုံးက အမိနျ့မခခြငျ မွနျမာအစိုးရကို လာရောကျအားပေးတာလို့ သုံးသပျနသေူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ တခြို့လလေ့ာသူတှကေတော့ မွနျမာ့အခကျ တရုတျအခကျြလို့ သုံးသပျကွပါတယျ။
နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူဖွဈတဲ့ ဦးမောငျမောငျစိုးက “အနောကျအုပျစုတှကေ တှနျးလလေေ မွနျမာဟာ တရုတျ၊ ဂပြနျ၊ အိန်ဒိယတို့နဲ့ ပိုပွီးတော့ နီးလလေေ ဖွဈမှာပဲ”လို့ ပွောပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံဟာ တရုတျနိုငျငံနဲ့ ပိုပွီးနီးစပျဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မွနျမာအစိုးရဘကျကတာဝနျရှိသူတှကေလညျး သမ်မတရှီရဲ့ ခရီးစဉျအတှငျး ကြောကျဖွူရနေကျဆိပျကမျးအပါအဝငျ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ (၇) ခုလောကျ လကျမှတျရေးထိုးဖို့ ရှိတယျလို့ မီဒီယာတှမှော ပွောဆိုထားပါတယျ။
တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအရေးမှာလညျး အနျစီအလေကျမှတျမထိုးရသေးဘဲ တိုကျပှဲတှဖွေဈနတေဲ့ မွောကျပိုငျးကလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ တှနေဲ့. ငွိမျးခမျြးရေးဆကျဆှေးနှေးဖို့ ကိစ်စဟာလညျး တရုတျနိုငျငံရဲ့အခနျးကဏ်ဍဟာ အရေးပါတဲ့နရောမှာရှိနတောမို့ ဒီကိစ်စတှလေညျး ဆှေးနှေးကောငျးဆှေးနှေးနိုငျတယျလို့ သုံးသပျသူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။
(One Belt & One Road-OBOR) ရပျဝနျးတဈခု လမျးကွောငျးတဈခု (ခါးပတျတဈကှငျး လမျးတဈစငျး) အစီအစဉျကို သမ်မတရှီက ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ စတငျဖျောထုတျခဲ့ပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျဟာ စီးပှားရေးကို အာရှဒသေနဲ့ ဥရောပဒသေအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ တောငျတရုတျပငျလယျ၊ တောငျပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာ၊ အိန်ဒိယသမုဒ်ဒရာနဲ့ တဈဆကျတညျးရှိတဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှေ၊ ပငျလယျသမုဒ်ဒရာကြှနျးနိုငျငံတှေ၊ အရှအေ့ာဖရိကနိုငျငံတှနေဲ့ မွထေဲပငျလယျမွောကျပိုငျးနိုငျငံတှကွေားမှာ စီးပှားရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံက တရုတျနိုငျငံနဲ့ နယျနိမိတျခငျြးထိစပျနတောမို့ သမ်မတရှီဖျောဆောငျမယျ့ ရပျဝနျးတဈခု လမျးကွောငျးတဈခု အစီအစဉျမှာ အရေးပါနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအစီအစဉျမှာ မွနျမာနိုငျငံကို တရုတျနိုငျငံက ပါဝငျစလေိုပါတယျ။ ဒီလိုဆန်ဒရှိတဲ့အတှကျ ၂၀၁၇ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလက မွနျမာနိုငျငံမှာ ကငျြးပတဲ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအဆငျ့ အစညျးအဝေးကို တရုတျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မစ်စတာဝမျယိ တကျရောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒီကာလအတှငျး မွနျမာခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ တှဆေုံ့ပွီး တရုတျ-မွနျမာ စီးပှားရေးစွင်ျကံတညျဆောကျဖို့ အဆိုပွုခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီဇငျဘာလအတှငျး တရုတျနိုငျငံကို ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သှားရောကျရာမှာလညျး သမ်မတရှီက တရုတျ-မွနျမာ စီးပှားရေးစွင်ျကံ တညျဆောကျရေးအတှကျ ထပျမံအဆိုပွုခဲ့တာကွောငျ့ သဘောတူညီခဲ့ကွတယျလို့ သိရတယျ။
တရုတျ-မွနျမာစီးပှားရေးစွင်ျကံမှာ တရုတျနိုငျငံ ရှလေီမွို့မှ မွနျမာနိုငျငံ မူဆယျမွို့၊ မူဆယျမှ မန်တလေး၊ မန်တလေးမှ အရှဘေ့ကျမှာ ရနျကုနျအထိ၊ အနောကျဘကျမှာ ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျဖွူမွို့အထိ ဆကျသှယျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီစီးပှားရေးစွင်ျကံလမျးကို တရုတျနိုငျငံက အင်ျဂလိပျအက်ခရာ “Y” ပွောငျးပွနျ စီမံကိနျးအဖွဈ တငျစားထားပါတယျ။
ဒါဟာ သမ်မတရှီ အကောငျအထညျဖျောနတေဲ့ (One Belt & One Road-OBOR)၊ ဒါမှမဟုတျ မွနျမာအချေါ ရပျဝနျးတဈခုလမျးကွောငျးတဈခု ပိုးလမျးမကွီးစီမံကိနျးရဲ့ တဈစိတျတဈဒသေပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ဒီခရီးစဉျအတှငျး ဒီစီမံကိနျးနဲ့ပတျသကျလို့လညျး ဆှေးနှေးနိုငျခရြှေိတယျလို့ လလေ့ာသူတှကေ ဆိုပါတယျ။ တရုတျဟာ မွနျမာနိုငျငံအတှကျတော့ အားကိုးဖှယျ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံကွီးလညျး ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ တရုတျနိုငျငံဟာ အဖကျဖကျက ဆကျနှယျနတောကွောငျ့ ဒီနိုငျငံနဲ့ အရေးပါတဲ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုက ဆကျလုပျရမယျလို့ NLD ပါတီရဲ့ ပွောခှငျ့ရ ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့က ပွောပါတယျ။
“မဖွဈမနေ ဆကျလုပျရမယျ။ ဒါပမေယျ့ တရုတျနိုငျငံကိုပဲ အမွဲအားကိုးပွီးတော့ မှီခိုနရေတဲ့အဆငျ့တော့ ဘယျတော့မှ မရောကျဘူးဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ ပွောနိုငျပါတယျ”လို့ ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့က ပွောပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံဟာ မွနျမာနဲ့ နှဈပေါငျး(၇၀) လောကျ သံတမနျဆကျဆံရေးရှိခဲ့ပမေယျ့ မွနျမာပွညျသူတှအေတှကျတော့ အကြိုးမရှိဘဲ မွနျမာဟာ နဈနာတယျဆိုတဲ့ အမွငျတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ဒါဟာ မွနျမာထဲမှာ လာရောကျရငျးနှီးမွုပျနှံတဲ့ တရုတျစီမံကိနျးတှဟော ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုမရှိတာ၊ မွနျမာအတှကျ အကြိုးအမွတျခှဲဝမှေုနညျးတာ စတဲ့ကိစ်စရပျတှကေ မွနျမာပွညျသူတှအေတှကျ ပွောစရာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။
မွနျမာထဲမှာ တရုတျရဲ့စီမံကိနျးတဈခုဖွဈတဲ့ မွဈဆုံကိစ်စနဲ့ပတျသကျလို့ မွနျမာအစိုးရနဲ့ ပွညျသူတှအေကွား မကလြေညျတာတှလေညျး ရှိနပေါသေးတယျ။ ဒီစီမံကိနျးဟာ အပွီးရပျဆိုငျးထားတာမဟုတျတဲ့အတှကျ သမ်မတရှီရဲ့ မွနျမာနိုငျငံခရီးစဉျမှာ ဒီစီမံကိနျးနဲ့ပတျသကျပွီး ပွနျလညျဆှေးနှေးတာမြိုးလုပျမှာကို မွနျမာပွညျသူတှကေ စိုးရိမျနကွေပါတယျ။
အနောကျနိုငျငံတှရေဲ့ မွနျမာနိုငျငံအပျေါဖိအားကို ဆနျ့ကငျြနိုငျဖို့အတှကျ တရုတျကို မွနျမာက အားကိုးရမယျ့ အခွအေနေ ဖွဈနပေါတယျ။ ဒီလိုအခွအေနဟော မွနျမာနိုငျငံက တရုတျရဲ့ လကျအောကျကို ရောကျမှနျးမသိ ရောကျသှားနိုငျတယျလို့ မွနျမာ့မဟာဗြူဟာနဲ့ မူဝါဒလလေ့ာရေးအငျစတီကြူ(ISP Myanmar)ရဲ့ ပွငျပဆကျဆံဆကျသှယျရေးဒါရိုကျတာ ဦးအောငျသူငွိမျးက ပွောပါတယျ။
“ယဘေုယပြွောရငျတော့ ကြှနျတျောတို့ဆီမှာ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှေ ပိုလာဖို့ ရှိမယျလို့ ထငျတယျ။ ဒါက လူထုအတှကျ အကြိုးအမွတျစီးဆငျမှုဖွဈမလားဆိုတာကိုတော့ အစိုးရရဲ့ လိမ်မာပါးနပျမှုအပျေါမှာပဲ မူတညျပါတယျ”လို့ ဦးအောငျသူငွိမျးက ပွောပါတယျ။
ဘယျသူတှေ ဘယျလို ပွောဆိုထောကျပွနပေါစေ။ တရုတျစီမံကိနျးကွီးတှကေ တဖွညျးဖွညျး ရုပျလုံးပျေါလာပွီဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခွအေနကေလညျး အနောကျနိုငျငံကိုလညျး အံတုလို့မရနိုငျသေးသလို တရုတျလကျအောကျကလညျး ရုနျးထှကျလို့ မရနိုငျသေးပါဘူး။ ဒီလိုအခွအေနတှေကွေောငျ့ နိုငျငံ့ခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက တရုတျ-မွနျမာစီးပှားရေးစွင်ျကံကို လကျခံခဲ့ဟနျတူပါတယျ။ ကွိုကျကွိုကျ၊ မကွိုကျကွိုကျ ဒီစီမံကိနျးကွီးထဲကို မွနျမာက ပါဝငျပတျသကျရပါတော့မယျ။ မွနျမာနိုငျငံကို သမ်မတရှီလာရငျ ဘာတှပေါလာမှာလဲ၊ သမ်မတရှီပွနျသှားရငျရော ဘာတှယေူသှားမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာရဦးမှာဖွဈပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #ရှီကငျြ့ဖငျြ #တရုတျမွနျမာဆကျဆံရေး
တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင် ဘာတွေယူလာပြီး ဘာတွေပြန်ယူသွားမလဲ
အမေရိကန်နဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ သမ္မတကြီး ၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အခရာကျတဲ့ သမ္မတ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတကြီး ရှီကျင့်ဖျင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့ကနေ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်တော့မှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဒုသမ္မတ အဖြစ်နဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံကို လာခဲ့ပြီး ခုလည်း ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် သူတကျော့ပြန် လာပြန်ပါပြီ။
တရုတ်သမ္မတကြီးရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါမလဲ၊ မြန်မာ့နုိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အခင်းအကျင်းတွေအပေါ် ဘယ်လောက်အကျိုးသက်ရောက်မလဲဆိုတာ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြပါတယ်။
ဒီတော့ တရုတ်သမ္မတ ရှိကျင့်ဖျင်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ သူဘယ်လုို ပုဂ္ဂိုလ်လဲ ဆိုတာ နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
ရှီကျင့်ဖျင်ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဆန်ရှီးပြည်နယ် ဖူဖျင်မှာ အဖ ရှီကျုံးရွှင်၊ အမိ ချီရှင်းတို့က မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဟန်တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မွေးချင်းမောင်နှမ လေးယောက်အနက် တတိယမြောက် သားဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မာက်စ်သီအိုရီနဲ့ အတွေးအခေါ်ယူဝါဒဆိုင်ရာ ပညာရပ် အထူးပြုဘာသာနဲ့ ချင်းဟွာတက္ကသိုလ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူမှုသိပ္ပံကျောင်းမှ ဥပဒေဒေါက်တာဘွဲ့ ရရှိခဲ့ကာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်အထိ ဆန်ရှီးပြည်နယ် ရန်ချွမ်းဒေသရှိ ဝမ်အမ်းရိစုပေါင်း လယ်ယာ၊ လျန့်ကျားဟဲအဖွဲ့မှာ ပါတီခွဲ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ရှီကျင်းပင်ဟာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ ဟူကျင်တောင်နေရာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လ ၁၄ ရက်မှာ ဆက်ခံခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ၇ ဦးမြောက်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတတာဝန်မထမ်းဆောင်မီ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အာဏာရ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူး ထမ်းဆောင်နေသလို ဗဟိုစစ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတရှီကျင်းပင်လက်ထက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ BRI စီမံကိန်းကို လက်ရှိမှာ အကောင်အထည်ဖော်နေပြီး ဒါဟာ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ရည်မှန်းချက်အကြီးဆုံး နိုင်ငံတကာမူဝါဒရေးရာ အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး အခြေခံအဆောက်အဦတွေ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းဖြစ်မှု၊ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနဲ့ ပြည်သူအချင်းချင်းကုန်သွယ်မှုကို မြင့်တင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း ဒီစီမံကိန်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသပါဝင်နေပါတယ်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ တံခါးပိတ်စီးပွားရေးစနစ်ကနေ ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့တာကြောင့် စီးပွားရေအလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပို့ကုန်တင်ပို့သူနဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး သွင်းကုန်တင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီဒီပီအရလည်း ကမ္ဘာ့ဒုတိယ စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ် လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ WTO ၊ APEC ၊ G-20 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရေးအနေနဲ့ နျူကလီးယားလက်နက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး စစ်တပ်နဲ့ စစ်ရေးအသုံးရိတ်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယအများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟာ အရှေ့အာရှရဲ့ အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့မှာ တတိယ သို့မဟုတ် စတုတ္ထအကြီးဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေအနေနဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ ၁၄၃၅ သန်းရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၉ ဒသမ ၆ သန်းရှိပြီး မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မျိုးစုံရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပြည်နယ်ပေါင်း ၂၂ ခု၊ ပိုင်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၅ ခု၊ မြူနီစီပါယ်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော် ၄ ခုနဲ့ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ၂ ခုရှိပြီး အာဏာရတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက အုပ်ချုပ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ရှီကျင့်ဖျင်ဟာ ဒုသမ္မတအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ဖူးပေမယ့် ခုမြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ဟာ သမ္မတရှီရဲ့ ဒီနှစ်သစ်အတွက် ပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်လည်းဖြစ်သလို သမ္မတအနေနဲ့တော့ ဒီခရီးစဉ်ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်သမ္မတဟောင်း ကျန်ဇီမင်းက ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ လာရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉ နှစ်တာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာမယ့် တရုတ်သမ္မတရှီရဲ့ ပထမဆုံးခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မလဲဆိုတာ လေ့လာသုံးသပ်သူတွေက အကဲခတ်နေကြပါတယ်။
တရုတ်-မြန်မာသံတမန်ဆက်ဆံရေးကို ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့တာဟာ အခုဆိုရင် နှစ်(၇၀)ပြည့်မြောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်-မြန်မာ ကုန်သွယ်မှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀၀ ကျော် ပမာဏအထိ ရှိနေပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာ တရုတ်နိုင်ငံက ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်ထားရတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်စီဂျေတရားရုံးကုို မသွားခင်လေးမှာလည်း တရုတ်နုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အိုင်စီဂျေက အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းမရှိသေးပေမယ့် အမိန့်ချပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အနောက်နိုင်ငံတွေက ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
သမ္မတရှီရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ နိုင်ငံတကာတရားရုံးက အမိန့်မချခင် မြန်မာအစိုးရကို လာရောက်အားပေးတာလို့ သုံးသပ်နေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့လေ့လာသူတွေကတော့ မြန်မာ့အခက် တရုတ်အချက်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဖြစ်တဲ့ ဦးမောင်မောင်စိုးက “အနောက်အုပ်စုတွေက တွန်းလေလေ မြန်မာဟာ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယတို့နဲ့ ပိုပြီးတော့ နီးလေလေ ဖြစ်မှာပဲ”လို့ ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ပိုပြီးနီးစပ်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာအစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း သမ္မတရှီရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းအပါအဝင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (၇) ခုလောက် လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ရှိတယ်လို့ မီဒီယာတွေမှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အရေးမှာလည်း အန်စီအေလက်မှတ်မထုိုးရသေးဘဲ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေနဲ့. ငြိမ်းချမ်းရေးဆက်ဆွေးနွေးဖို့ ကိစ္စဟာလည်း တရုတ်နုိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတာမို့ ဒီကိစ္စတွေလည်း ဆွေးနွေးကောင်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
(One Belt & One Road-OBOR) ရပ်ဝန်းတစ်ခု လမ်းကြောင်းတစ်ခု (ခါးပတ်တစ်ကွင်း လမ်းတစ်စင်း) အစီအစဉ်ကို သမ္မတရှီက ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ဟာ စီးပွားရေးကို အာရှဒေသနဲ့ ဥရောပဒေသအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ၊ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကျွန်းနိုင်ငံတွေ၊ အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့ မြေထဲပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာမို့ သမ္မတရှီဖော်ဆောင်မယ့် ရပ်ဝန်းတစ်ခု လမ်းကြောင်းတစ်ခု အစီအစဉ်မှာ အရေးပါနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်နိုင်ငံက ပါဝင်စေလိုပါတယ်။ ဒီလိုဆန္ဒရှိတဲ့အတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးကို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဝမ်ယိ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်း မြန်မာခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံတည်ဆောက်ဖို့ အဆိုပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်ရာမှာလည်း သမ္မတရှီက တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ထပ်မံအဆိုပြုခဲ့တာကြောင့် သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ သိရတယ်။
တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေးစင်္ကြံမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှ မြန်မာနိုင်ငံ မူဆယ်မြို့၊ မူဆယ်မှ မန္တလေး၊ မန္တလေးမှ အရှေ့ဘက်မှာ ရန်ကုန်အထိ၊ အနောက်ဘက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့အထိ ဆက်သွယ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးပွားရေးစင်္ကြံလမ်းကို တရုတ်နိုင်ငံက အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ “Y” ပြောင်းပြန် စီမံကိန်းအဖြစ် တင်စားထားပါတယ်။
ဒါဟာ သမ္မတရှီ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ (One Belt & One Road-OBOR)၊ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာအခေါ် ရပ်ဝန်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းတစ်ခု ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ဆွေးနွေးနိုင်ချေရှိတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ တရုတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ အားကိုးဖွယ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တရုတ်နိုင်ငံဟာ အဖက်ဖက်က ဆက်နွယ်နေတာကြောင့် ဒီနိုင်ငံနဲ့ အရေးပါတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက ဆက်လုပ်ရမယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ပြောပါတယ်။
“မဖြစ်မနေ ဆက်လုပ်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲ အမြဲအားကိုးပြီးတော့ မှီခိုနေရတဲ့အဆင့်တော့ ဘယ်တော့မှ မရောက်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ပြောနိုင်ပါတယ်”လို့ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ပြောပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနဲ့ နှစ်ပေါင်း(၇၀) လောက် သံတမန်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပေမယ့် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော့ အကျိုးမရှိဘဲ မြန်မာဟာ နစ်နာတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာထဲမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ တရုတ်စီမံကိန်းတွေဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာ၊ မြန်မာအတွက် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမှုနည်းတာ စတဲ့ကိစ္စရပ်တွေက မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ပြောစရာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
မြန်မာထဲမှာ တရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေအကြား မကျေလည်တာတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီစီမံကိန်းဟာ အပြီးရပ်ဆိုင်းထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် သမ္မတရှီရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်မှာကို မြန်မာပြည်သူတွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဖိအားကို ဆန့်ကျင်နိုင်ဖို့အတွက် တရုတ်ကို မြန်မာက အားကိုးရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေဟာ မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်ရဲ့ လက်အောက်ကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ မြန်မာ့မဟာဗျူဟာနဲ့ မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူ(ISP Myanmar)ရဲ့ ပြင်ပဆက်ဆံဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာ ဦးအောင်သူငြိမ်းက ပြောပါတယ်။
“ယေဘုယျပြောရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ပိုလာဖို့ ရှိမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါက လူထုအတွက် အကျိုးအမြတ်စီးဆင်မှုဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့ အစိုးရရဲ့ လိမ္မာပါးနပ်မှုအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်”လို့ ဦးအောင်သူငြိမ်းက ပြောပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ပြောဆိုထောက်ပြနေပါစေ။ တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေက တဖြည်းဖြည်း ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကလည်း အနောက်နိုင်ငံကိုလည်း အံတုလို့မရနိုင်သေးသလို တရုတ်လက်အောက်ကလည်း ရုန်းထွက်လို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေးစင်္ကြံကို လက်ခံခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ ကြိုက်ကြိုက်၊ မကြိုက်ကြိုက် ဒီစီမံကိန်းကြီးထဲကို မြန်မာက ပါဝင်ပတ်သက်ရပါတော့မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို သမ္မတရှီလာရင် ဘာတွေပါလာမှာလဲ၊ သမ္မတရှီပြန်သွားရင်ရော ဘာတွေယူသွားမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #ရှီကျင့်ဖျင် #တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေး
ဆောငျးပါး, မွနျမာသတငျး, သုံးသပျခကျြ